I-SiteCatalyst 15 iqhathanisa ne-Analytics 10
NgeSonto, ngoMashi 13, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Sinamakhasimende asebenzisa i-Omniture neWebtrends. Vele, uma uyifundile le bhulogi, uyazi ukuthi iWebtrends iklayenti. Lokho kungukuvezwa okugcwele kokuthi ngingahle ngibe nombono wokuchema ngezinto… kepha ngethemba ukuthi ukubheka eyodwa kokuhlangana okusha komsebenzisi okwenzelwe inguqulo ngayinye kuzokunikeza ukudla komcabango.
Ngike ngasho ngaphambili ukuthi inkinga iningi analytics amapulatifomu ukuthi ahlinzeka ngemibiko, kepha awanalo ikhono lokubonisa imininingwane ukuze ukwazi ukwenza okufanele izinqumo.
Nakhu ukuthuthuka kwakamuva kwe Ukukhishwa kweSayithiCatalyst 15 njengoba kudluliswe ngevidiyo yabo yakamuva.
I-Webtrends Analytics 10 inikeza i-UI entsha enembile kakhulu, elungisiwe futhi elula ukuyisebenzisa. I-UI yenzelwe ukuchofoza nokuthinta okokuxhumana okuhlinzeka ngendlela ebonakalayo yokubuka idatha yakho. I-interface yomsebenzisi isebenzisa izithonjana ukunikeza isithombe sempahla yedijithali oyilandelayo.
IWebtrends nayo yethula Izikhala - Isikhala sanoma yiluphi uhlelo lokusebenza, iwebhusayithi, noma ipulatifomu ofuna ukuyilandela. Lokhu kungaba yikhasi lakho le-Facebook, iwebhusayithi yakho, uhlelo lwakho lokusebenza lwe-Android, njll. Izikhala zihlela ngokuzenzakalela amaphrofayli. Amaphrofayili sekuyisikhathi eside ayisici esikhulu kumaWebtrends, ahlinzeka ngokuguquguquka okukhulu, kepha eza ngenhlangano ebiza izindleko. Manje, amaphrofayli afinyelela ku-Spaces.
Nini UJohn Lovett wabona ukubuka kuqala, wakubeka kahle… "Kubukeka sengathi yi-Infographic!". Ngicabanga ukuthi lokho kusitshela yonke indaba… Izibalo zeWebtrends 10 iguqukele ngaphandle kokubika futhi manje isibonisa imininingwane ngendlela ebonakalayo eyenza izinkampani zikwazi ukwenza izinqumo.
Mar 13, 2011 ku-8: 14 PM
“Kubukeka njenge-infographic” akusikho ukudumisa! 🙂
Noma kunjalo, lokhu kuvezwa ngapha nangapha kungokokuqala engikubonile, futhi ngiyabonga ngakho.
Ubani owayengacabanga eminyakeni emihlanu eyedlule ukuthi i-stodgyest ye-stodgy (WT) ingafinyelela okuthile okubukeka kumnandi kangako. Futhi, "ukubukeka okuhle" akuyona indumiso.
Doug, ngiyethemba uzongena ungene kulezi zinhlaka ezimbili ngokuqhubekayo… ukuqonda, ukusebenza, ukuguquguquka kungaba yimicu yami engiyithandayo. Noma mhlawumbe nami ngizokwenza kanjalo, uma ngithola isikhathi. Ngimatasa kakhulu
Futhi, njengoba uhlala ucacile ezincazelweni zakho, ungathanda yini ukungena ezintweni ze-Spaces kokunye okuthunyelwe futhi unikeze impendulo yakho. Noma khomba kokuthile okushicilelwe yiWebTrends okunengqondo ngakho.
Uxolo uma ngibonakala ngicindezela, kepha okuthunyelwe kwakho neminye iminikelo inhle impela futhi ibalulekile, aw, iyaxhaphaza.
Mar 14, 2011 ku-12: 46 AM
I-CGrant, kuhle ukuthi ucindezele !!! Re: Infographic, ungaqiniseki ukuthi lokho kungaba yiphutha kuphi. Imidwebo yolwazi izibonisi ezibonakalayo zombili ezihlanganisa idatha futhi ziyikhombise ngokukhethekile ukunikeza isithombe esitshela 'indaba' kangcono. Bheka lezi zithombe ezimbili ezingenhla… Yisiphi empeleni esinikeza ukuqonda ngokusebenza kanye nezinhloso ezibhekiswe ekuphenduleni okuqondene nekhasi okukhulunywa ngalo?
Mar 14, 2011 ku-1: 11 AM
Yebo, ake sifike ekhasini elifanayo ukuthola izincazelo.
Kuliqiniso, incazelo eyisisekelo ye-infographic iqukethe inhloso yokuxoxa indaba kangcono. Kodwa-ke leli gama selisho nokuthi yonke into yedamu equkethe imibala, izithombe, ifu lamagama noma amabili, osayizi befonti eguquguqukayo nemibala ngaphakathi kweseli, futhi yonke into ayilandeli igridi elula.
Okubizwa nge- “infographics” namuhla kungikhumbuza ngezinsuku zokuqala zamaphrinta e-laser lapho wonke umuntu eqala ukuzakhela amaflaya asebenzisa ubuciko be-clip namafonti afana nohlanya, okuholele ekusabekeni okumsulwa.
Ngakho-ke ake sinamathele kunhlobo enhle, ehloniphekile yelebula le-infographic elihlobene nokwenza ngcono ngokungafani nokukhanya noma ukuthambekela.
Mar 14, 2011 ku-10: 00 PM
Ngivumelana ne-cgrant. UWebtrends uchithe isikhathi esiningi exazulula "amatafula abo acacile ngobukhulu nezinyathelo" izingqinamba ezibukwayo zeWebtrends 8 nangaphambilini. Ungabona ukuthi bagxile ekuvuseleleni isikhombimsebenzisi esibonakalayo ngoba konke ukukhishwa kwabo kokugcina (9 no-10) kugxile kakhulu kusixhumi esibonakalayo. Ngokuqinisekile i-Webtrends 9 yethule izici ezinhle zokuthekelisa idatha (REST API, njll) kepha ngombono wami, ushintsho olukhulu kwaba isikhombimsebenzisi esibheke umsebenzisi.
Lokhu kubuyekezwa kwakamuva kwe-Analytics 10 kuqiniseka kakhulu ngocansi, futhi ngethemba lokuthi kuzokwenzeka. Esinye isici esingeziwe esishiwo ku-Engage ukuthi Ikhasi ngalinye embikweni wamakhasi lizothola ideshibhodi yalo - lokho kufanele kuthakazelise kakhulu, futhi kube wusizo!
Vele, Ingqungquthela ka-Omniture kuleli sonto igxile kuzinguquko u-Webtrends angazange azicabangele kusukela ngaphambilini… Inguqulo 6? Izinguquko zepulatifomu yangemuva! Ukuthuthukela ku-SiteCatalyst 15 kuzofika kugcwele izinguquko ngemuva kwezigcawu. Lezi zinguquko zizovumela zonke izinhlobo zamakhono amasha ngethuluzi; amakhono i-Webtrends angaphupha ngayo kuphela kuze kube yilapho ethatha isinqumo sokuvuselela i-Processing Engine.
Olunye lwalezi zinguquko ezibalulekile - Ukuhlukaniswa Okusheshayo. Ngokuqinisekile i-Google Analytics inayo isikhathi esingaphezu konyaka manje, kodwa sekuyisikhathi sokuthi amathuluzi we-Enterprise abambe. Ngokuya ngezimemezelo ezenziwa ku-Engage ngesonto eledlule, akubonakali sengathi ukwakhiwa kombiko osendizeni noma ukuhlukaniswa kwamakhemikhali kuye kwacatshangelwa yiWebtrends. Ufuna ukwengeza isilinganiso esisha embikweni wakho? Xhumana noMphathi wakho, osabhekene ne-interface efanayo asebenzisana nayo eminyakeni engu-4-5 edlule! Ngemuva kwalokho nquma ukuphinda uhlaziye noma ufake kuphela emibikweni eya phambili. Ukungeza ama-Metrics ku-Omniture kulula njengokuchofoza bese uhudula, futhi kuzwakala sengathi sekuzoguquka ngokwengeziwe - ngenxa yokuthuthuka kokuphela kwangemuva.
Ukuthola uhlu oluphelele lokuthuthuka kwe-Omniture ku-SiteCatalyst ku-Version 15, bheka i-athikili ka-Adam Greco: http://adam.webanalyticsdemystified.com/2011/03/09/welcome-to-sitecatalyst-v15/
Khumbula, hhayi ukwahlulela incwadi ngekhava yayo. Ukuthi iWebtrends inedeshibhodi yekhasi elihle lokufika akusho ukuthi iyashintshashintsha futhi ayenzi lutho.
Ukuhlanganiswa Kwezenhlalo Nezeselula zeWebtrends? Manje ukuthi i-sh * t ipholile!
Ngo-Apr 9, i-2011 ku-12: i-46 PM
Umehluko omkhulu phakathi kwe-webtrends ne-Omniture, yindlela idatha egcinwa ngayo. KuWebtrends uhlaziya amafayili wezinombolo bese idatha yombiko bese igcinwa kumafayili amafulethi esikole esidala.
Ku-Omniture ugcina imininingwane ku-DB ehlobene. Lezi zindlela ezimbili zombili zinenzuzo nokungalungi.
1. Ku-webtrends ungahlaziya idatha yakho. Lokhu kusiza kakhulu ngezindlela eziningi. Ungahlola ukusetha kwakho noma ushintsho kusethaphu yakho kalula, ungasetha imibiko emisha bese ubona emuva ngesikhathi, uma kungakhiwa ngemingcele yangokwezifiso. I-classic ingu-paghe wokungena ngokubhekisa ekhasini, kepha kukhona amathani ezibonelo ukuthi kungani lokhu kusiza. Kodwa-ke njengoba iWebtrends ingasebenzi kwi-DB enobudlelwano, awukwazi "Ukubuza" i-db bukhoma, nganoma yini oyifunayo. Kufanele wakhe umbiko futhi uhlaziye imininingwane.
2. Ku-Omniture "ungabuza" idatha bukhoma, ngoba usebenzisa i-DB ehlobene. Lokhu kuvumela ukwahlukaniswa bukhoma kweDiscovery VS Site Catalyst. Lokhu kusho ukuthi awukwazi ukuphinda uhlolisise idatha yakho, ngakho-ke ukuhlolwa kunzima kakhulu futhi uba nenkinga yokuzama ukukala izinto emuva ngesikhathi, obungakaze usethe. Futhi i-DB enobudlelwano inemikhawulo yokuthi ingabamba kangakanani amadatha amakhulu, ngakho-ke (futhi angiyena uchwepheshe we-Omniture, ngakho-ke ngicela ungiqondise) lapho uhamba ngaphezu kwamakhulu ezinkulungwane ezimbalwa, i-Omniture "isampula" idatha ukugwema umbuzo osangene izikhathi zokulayisha. Lokhu kuletha inkinga lapho ufuna ukuthola imininingwane ngqo hhayi isampula ledatha. Izingxenye ezibukhoma kodwa zipholile NGEMPELA futhi ngifisa sengathi iWebtrends okungenani ingenze kube nokwenzeka ukusebenzisa izingxenye ezikuma-analytics eWebtrends, lapho uthenge amaSegmenti (Thola umlingani weWebtrends)
Ngokuyinhloko, konke ukwahlukaniswa okubukhoma kuyiqiniso, kuhlunga imibiko kususelwa kuhlu lwama-ID amakhukhi. Ngenkathi iWebtrends Analytics ingahle ingakwazi ukukusebenzisa kalula lokhu ku-Analytics 10, ngenxa ye-DB engeyona eyezobudlelwano, kunokuba lula ukuthi bakhe ekwakheni ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye yomsebenzisi kusuka kuthuluzi labo le- “Segment” njengesihlungi sanoma yimuphi umbiko ku-Webtrends. Eqinisweni ungakwenza lokho, kepha kuzodinga ukuthi uthumele iSegmentt oyikhethile bese wenza isihlungi ngesandla ngawo wonke ama-ID amakhukhi futhi usisebenzise njengesihlungi esifaka phakathi kuphela.
Ngakho-ke, kukhona ubuhle nobubi bawo womabili ama-setups. Kuyingxoxo ethokozisayo, okufanele umuntu ayithande.
Ngo-Apr 11, i-2011 ku-5: i-18 PM
Awuqinisekile ukuthi uyazi yini ngeWebtrends Visitor Data Mart - iguqula amafayela asuka ku-Analytics aye kudathabheyisi yezobudlelwano ongayisebenzisela imibuzo ye-ad-hoc noma nehlukaniswe ngendiza ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi seSegment. Uma ngikwazi ukuqhathanisa, kuyenzeka futhi kuguquguquke kakhulu kunezingxenye kuGoogle Analytics nakuSayithi Catalyst. I-Visitor Data Mart “ingeze” kwi-Analytics ngakho-ke usenaso isikhombimsebenzisi esisodwa, ukuphathwa okukodwa njll. Ngicabanga ukuthi le kuyindlela engcono kakhulu njengoba ungasebenzisa amafayili acabalele enzelwe ukubika (isb. Akukho sampling) kanye ne-database ehlobene ukuhlukaniswa kwemisebenzi kanye neminye imisebenzi ye- "on-line".
Ngo-Apr 23, i-2011 ku-4: i-39 PM
Ngiyazi kahle i-VDM & Segment, kepha ibhuloho elibuyela ku-Analytics kusamele lakhiwe. Awukwazi namuhla ukubuka ngokwesibonelo izimo zakho zokuguqulwa, ukuhlaziywa kwendlela yakho, ukubhola komkhankaso wakho noma omunye umbiko we-Analytics kuWebtrends Analytics weSegment echazwe kumaSegment & VDM.
Empeleni lokho kuhlanganiswa kungakhiwa kalula kalula, ngokumane ufake izihlungi ngokususelwe kuhlu lwama-ID amakhukhi avela kumaSegmenti. Ngakho-ke ake sicabange ukuthi wakhe Ingxenye ku-VDM nasezigabeni. Le ngxenye yibo bonke abavakashela iwebhusayithi yasebhange enomholo waminyaka yonke ongaphezu kwama-100.000 $ asevele eyikhasimende, kepha angenaso isivumelwano sePensheni futhi ochofoze isikhangiso maqondana nempesheni eyengeziwe ezinsukwini ezingama-30 ezedlule.
Ufuna ukubona ukuthi yimaphi amakhasi akhethwa yilesi Sigaba, ukuthi badabula kanjani iphrofayili ye-flash yekhasimende nokuthi baphuma kuphi kusixhumi esibonakalayo sebhange labo lewebhu. Njengamanje, lokho akunakwenzeka. Ungakha Ingxenye, kepha awukwazi ukusebenzisa leyo Ngxenye ku-Analytics njengesihlungi. Konke ongakudinga ngempela ukuthi ama-ID ekhukhi ekhethelo athunyelwa kusuka eziNgxenyeni futhi adalwe njengesihlungi ne-voila, uzoba nemibiko yakho.
Yileso isici esiyinhloko engingangeza ngaso, uma nginquma. Izingxenye zisewumkhiqizo omangalisayo futhi enembile ngokumangazayo. Kepha udinga ukwazi ukubuyisela ingxenye emuva kupulatifomu yakho yezibalo.
Mar 14, 2011 ku-1: 20 AM
Ngakho-ke, maqondana nokwenza ngcono. Uma ngibheka ngakunye, ngingasho ukuthi abaklami beWebTrends benze izinqumo ezingcono mayelana nokuthi yini okufanele babe nayo kulesi sikrini sokuvula… yize kusengathuthukiswa. Ukube benginalezi zikrini engizokwethula kubaphathi, iWebTrends eyodwa ibizosetha izingxoxo ezingcono kakhulu futhi iholele emibuzweni ethize kakhulu yokuhlaziywa okuqhubekayo.
IWebTrends eyodwa nayo ingavele ivele kahle kubaphathi. Ngingasho yini ukuthi umuntu wakho wokuphatha ojwayelekile ukhungathekile ngezindawo ezinemfashini njengoba zinedatha enhle?
Mar 14, 2011 ku-1: 21 AM
Hmm, ukuphawula kwami ​​kwesibili kukhombisa ngaphezulu kwamazwana wami wokuqala kulesi sixhumi esibonakalayo. Kufanele zifundwe ngokulandelana kuya phansi kuya phezulu.
Mar 18, 2011 ku-5: 26 PM
Uma kukhona into eyodwa ongeke usole iWebtrends ngayo, ukungabi bhetyebhetye. Bekulokhu kuyithuluzi eliguquguquka kakhulu.
Ngicabanga ukuthi i-Omniture ilahlekelwa i-ATM yomhlaba.
Ungabona ama-analytics amaningi ku- http://www.Webtrends.com/analytics10